मागी बिबाह गर्नु पहिले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु • raradiodarpan.com
मागी बिबाहको अवधारणा हाम्रो देशमा धेरै लोकप्रिय छ। केहि मान्छेहरु प्रेम बिबाह गर्न पनि रुची राख्छन। तर देशमा धेरै शंख्या मागी बिबाह गर्नेको नै छ। आजपनि धेरै मान्छेहरु आफ्नो घर परिवारले रोजेको मान्छे संग नै बिबाह गर्न मन पराउछन्।
मागी बिबाहमा तपाइंले आफ्नो लागि सहि जीवन साथि चुन्न बहुत जरुरि हुन्छ। त्यसैले यदि तपाइँले यहा बताएका केहि कुराहरु ध्यानमा राख्नु भयो भने मागी बिबाहमा नै आफ्नो लागि उपयुक्त जीवन साथि पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् जान्नुहोस यी महत्वपुर्ण जानकारीका बारेमा।
जब मागी बिबाहको लागि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाइ भेट्नुहुन्छ तब उसलाई “बिबाह गर्ने इच्छा छ या छैन” भनेर जरुर सोध्नुहोस। उसलाई सोध्नुहोस् कि, ऊ बिबाहको लागि तयार त छ? यो कुरा पहिलो भेटमा मात्र हैन जब जब उसलाई भेट्नु हुन्छ तब उसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइंलाई लाग्छ कि ऊ सिर्फ परिवारको कारण तपाइँ संग बिबाह गर्न तयार भएको छ भने तपाइँ उसलाई बिबाह गर्ने सोच त्यागीदिनुहोस।
यसरि गरिएको बिबाह धेरै समय टिक्न सक्दैन। कहिलेकाहीं हुनसक्छ कि ऊ मात्र परिवारको करकापले तपाईं संग बिबाह गर्दैछ तर ऊ तपाईंलाइ केहि बताउन चाहदैन। यदि यस्तो भयो भने भविष्यमा तपाईंहरुको जीवनमा धेरै संकट आउन सक्छन। कसैको करले भएको बिबाहमा कहिल्यै प्रेम आउन सक्दैन। अनि प्रेम बिना सम्बन्ध धेरैदिन टिक्दैन पनि ।
उसले खुशीले बिबाह गर्दैछ या परिवारको कारणले भनेर पत्ता लगाउन उसलाई बिबाहको लागि तयार छौ या छैनौ भनेर सोध्नुको अलावा उसको मुहारमा हेर्नुहोस। के तपाइंले उसको अनुहारमा बिबाहको लागि कुनै उत्सुकता या खुशी देख्नु भयो? के ऊ पनि तपाईंको बारेमा जान्ने चाहाना गरि रहेको छ? यदि छैन भने हुनसक्छ कि ऊ मात्र परिवार को लागि करकापमा तपाईं संग बिबाह गर्दैछ । यदि त्यस्तो थाहा पाउनु भयो भने उसलाई प्रस्ट संग भनिदिनुहोस कि, बाध्य भएर बिबाह गर्नु कुनै जरुरत छैन। यो जीवन को सबै भन्दा महत्वपूर्ण निर्णय हो, यसलाई स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पर्छा।
सबैजना आफ्नो पार्टनर आफुसँग इमानदार भएको चाहन्छन्, तर वास्तविकता यो छ कि तपाईं आफ्नो पार्टनरको इमानदारी चाँडै आकलन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उसलाइ मन पर्ने, मन नपर्ने, आर्थिक अवस्था र पुराना सम्बन्धहरू जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाइंलाई उसको स्वाभावको बारेमा जान्न मदत गर्नेछ।
उसका आनीबानी साथि संगत, पढाइ आदिको बारेमा बुझेर तपाईं उसको स्वाभाव को आंकलन लगाउन सक्नुहुन्छ। उसले उसको घरपरिवारमा आफ्ना परिवार अनि साथीभाई संग कस्तो ब्यबहार गर्दैछ भन्ने बिचार गरेर पनि उसको आनीबानी को बारेमा जान्न सकिन्छ। जस्तो कि ऊ आफ्ना भाइ बहिनि संग धेरै रुस्ट तरिकाले बोलि रहेको छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ कि उसमा नम्रताको कमि हुनसक्छ। यस्तो बानि भएको मान्छेले भविष्यमा पनि यस्तै ब्यबहार गर्ने सम्भावना हुन सक्छ।
जब तपाइँ तपाइँको पार्टनरलाई पहिलो पटक भेट्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस् कि तपाइँ र उहाँ एक अर्कोमा सहज त हुनुहुन्छ? वास्तवमा, हाम्रो भविष्यको ठूलो हिस्सा एकअर्का बिचको सहजतामा निर्भर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं पहिलो पटक एकअर्का संग सहज हुनुहुन्न भने, तपाईंहरु भविष्यमा पनि असहज रहने संभवाना रहन्छ।
के तपाईंहरु एकअर्का संग खुलेर बोल्न सक्नु हुन्छ? सुरुवातमा नै धेरै खुलेर बोल्न त सकिदैन तरपनि तपाईंहरु बीच कुनै कनेक्सन नै बन्दैन कि भनेर चाहि अवश्य बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंको पार्टनरले अरूको भावनालाई कदर गर्दछ वा गर्दैन।
यो जान्नको लागि, तपाईंले अरूप्रति उसको व्यवहार हेर्नु पर्दछ, किनकि जसले अरूका भावनाहरूको कदर गर्दछ तपाईंको लागि राम्रो पार्टनर हुनेछ। यस तरिकाले, यी केहि चीजहरूको साथ तपाईंको पार्टनरलाई मुल्यांकन गरेर तपाईं सजिलैसँग मागी बिबाह बाट एक असल जीवन साथि पाइ सुन्दर जीवन जिउन सक्नुहुनेछ।